रेड्मी १० नेपाली बजारमा, यस्ता छन् फिचर्स - Beemapost.com
रेड्मी १० नेपाली बजारमा, यस्ता छन् फिचर्स
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १७:४९
काठमाडौँ । ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडर शाओमीले रेड्मी १० नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । स्मार्टफोनको बजारमा हुने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सस्तो दरमा उत्कृष्ट उत्पादन ल्याउने लक्ष्यका साथ शाओमीले रेडमी १० लन्च गरेको हो ।
लन्चको बारेमा बोल्दै शाओमी नेपालका कन्ट्री जेनेरल म्यानेजर अमित कुमार पंडाले भने, “हाम्रो लागि उपभोक्ता नै हाम्रो केन्द्रबिन्दु हो जसले गर्दा हामीलाई शाओमीले प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजी सबैका लागि पहुँच योग्य बनाउन प्रेरित गर्दछ । कम बजेटमा राम्रो परफमेन्स खोज्नेहरुका लागि रेड्मी १० सबै भन्दा उत्कृष्ट उत्पादन हो ।
यो उपकरणमा फ्ल्यागशिप उपकरणहरूमा पाइने स्न्यापड्रागन ६८० र 6nm प्रोसेसरहरु रहेको छ । अग्रणी वर्गको प्रोसेसर, स्न्यापड्रागन ६८० र ६००० mAH को ब्याट्रीले उपभोक्ताहरुलाई ढिलाइ मुक्त र सहज अनुभव सुनिश्चित गर्नुका साथै १७.०४ cm (९६.७१“) डिस्प्ले र ५०MP डुअल क्यामेरा भएको यो रेड्मी १० ले आरामदायी दृश्य अनुभव प्रदान गर्दछ ।”
नयाँ रेड्मी १० को पछाडि जडान गरिएको ठूलो क्यामेराको साथमा फिंगरप्रिन्ट स्क्यान गर्ने स्पेस सबैभन्दा आकर्षक विशेषता रहेको छ। १.१३ mm मोटाइ र २०३ ग्राम वजन भएको यो फोन १७.०४ cm (६.७१“) डिस्प्लेको साथ तपाईको लागि उत्तम उत्पादन हुन सक्छ।
पछिल्लो संस्करणको तुलनामा २ गुना छिटो
बजेटको आधारमा लोकप्रिय Snapdragon 680 चिपसेट कार्यसम्पादनमा कुनै सम्झौता नगरी प्रयोगकर्ताहरूको उत्पादकता बढाउन समर्पित छ। एन्ड्रोइड ११ मा आधारित MIUI १३ सफ्टवेयर भएको रेड्मी १० मा 6GB सम्मको RAM र 128GB आन्तरिक स्टोरेज रहेको छ जुन प्रयोगकर्ताहरूको उत्पादकता बढाउन समर्पित छ।
अप्टिक्सको सन्दर्भमा, Redmi 10 मा कुल तीन सेन्सरहरू छन् । पछाडिको डुअल क्यामेरा सेटअपमा ५० एमपी प्राइमरी शूटर र २ एमपी डेप्थ क्यामेरा समावेश छ भने सेल्फी र भिडियो कलहरूको लागि 5MP क्यामेरा समावेश गरिएको छ । यो रेड्मी १० मा रियर र फ्रन्ट क्यामेरा दुवैबाट ३०fps मा १०८०p भिडियो खिच्न सकिन्छ ।
डुअल–ब्यान्ड वाइफाइ र ब्लुटुथ 5.0 समर्थन गर्ने, डाउन–फायरिङ स्पिकर र 3.5mm हेडफोन ज्याकको साथ यस रेड्मी १० मा प्रयोगकर्ताहरूले 512 GB सम्मको माइक्रो एसडी कार्ड विस्तार गर्न सक्छन् ।
नेपालमा रेड्मी १० को मूल्य र उपलब्धता
रेड्मी १० नेपाली बजारमा मिडनाइट बल्याक, पसिफिक ब्लु, करेबेयन ग्रीन मा उपलब्ध छ ।
नेपालमा रेड्मी १० ४/६४ जिबी संस्करणको मूल्य रु. १८,९९९ छ । त्यस्तै, हाई–एन्ड ६/१२८ जिबी संस्करणको मूल्य रु. २१,९९९ रहेको छ। रेड्मी १० को यो फोन नेपालभर आधिकारिक मी स्टोरहरूमा उपलब्ध छ ।